Ny tombontsoa amin'ny fianarana tsy tapaka eo amin'ny asa
Ny fianarana tsy tapaka dia fehezanteny malaza be nandritra ny fotoana lava, efa am-polony taona. Misy antony izany. Tsara ny manohy ny fianarana any am-piasana, na iza ianao na inona na inona ataonao. Nahoana? Inona no ao anatinao? Ny zava-drehetra, na tsy eo amin'ny toerana mety ianao. Ny Organisation Gallup, malaza amin'ny fandatsaham-bato, dia mino sy manohana fa ny olona dia mahavita tsara rehefa mahavita asa tsara. Ny fiezahana hampianatra olona iray hanao asa tsy tiany dia tsy miasa.
Manao asa an-terivozona sy asa tsy mahomby izy io.
Arovy ny fahasambaranao . Ianao ihany, ankoatra izany. Fantaro hoe iza no mety aminao, ary mandehana mianatra momba ny fomba hanaovana izany. Arakaraka ny ianaranao any am-piasana dia sarobidy kokoa ho an'ny mpampiasa anao ianao ary mety hampandroso anao kokoa.
Inona no eritreretinao? Tianao ve ny hahalala ny fomba fiasan'ny fizahan-tany iray na inona no mety hitranga raha nanova ny dingana? Miomàna. Jereo manodidina ary eritrereto, na inona na inona, momba ny zavatra rehetra, ary avy eo dia tadiavo. Ny fahalianana dia iray amin'ireo fototry ny fianarana, na firy taona ianao.
Dia toy izany ny fisainana manakiana , ary izany no angatahanay ataonareo eto. Ireo mpandinika kriziana dia mametraka fanontaniana, mitady ny valiny, mamakafaka ny zavatra hitany amin'ny saina misokatra, ary mitady vahaolana. Rehefa manao ireo zavatra ireo ianao, dia tsy afaka manampy anao fa hianatra, ary lasa sarobidy kokoa amin'ny mpampiasa anao.
Raha tsy lasa sarobidy kokoa ianao, dia fampahalalana manan-danja izany. Mety amin'ny asa ratsy ianao!
Raiso ny hoavinao eo an-tananao
Raha tsy manaiky ilay hery lehibe izay miandry anao hiondrika fotsiny ny mpanara-maso anao, dia asio sary iray ho azy. Midika izany amim-panajana, mazava ho azy. Mamoròna ny drafitra fampandrosoana manokana ary ifanakalozy hevitra amin'ny mpiandraikitra anao.
Ny drafitra fampandrosoana dia tokony hahitana:
Ny tanjonao manokana; Ataovy azy ireo tanjona SMART
Ny fahalalana sy ny fahaiza-manao izay hivoatra
Mangataha fanampiana amin'ny endriny rehetra azo alaina amin'ny asanao: fotoana hiasana mandritra ny asa mba hianatra, fanolorana mari-pahaizana , mpanolo-tsaina.
Adinontsika indraindray ny zavatra fantatsika. Antsoina hoe fahalalana tsy fantatra izy io. Fantatsika tsara izany fa ataontsika izany. Raha mijery manodidina ianao dia mety misy olona mitsangana ao ambadikareo izay tsy dia mahazatra loatra. Omeo tanana izy ireo. Ampianaro azy ireo izay fantatrao. Aoka ho mpanolo-tsaina . Mety ho iray amin'ireo zavatra mahafa-po indrindra nataonao hatramin'izay.
Ny fifantohana dia mifandray akaiky amin'ny tambajotra. Raha toa ka tsy mpandraharaha ianao dia tokony ho. Toy izao ny fomba hahatongavana ho iray:
Ny Herin 'ny Fifandraisana eo amin' ny Fihaonam-pampianarana Fanohizana
Fomba fifandraisana amin'ny fianarana maharitra
Ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra azonao atao, raha tsy manao zavatra hafa ianao dia ny hanana saina tsara. Rehefa misaintsaina ny zavatra azonao atao ianao fa tsy izay tsy azonao atao, dia mbola mahery kokoa ianao rehefa mijoro amin'ny zavatra inoanao fa tsy maniratsira izay tsy tianao.
Ny fieritreretana tsara. Raha mila baiko fanampiana ianao, manomboka amin'ny fahazarana misaina tsara, jereo ity andian-dahatsoratra ity: Thinking Positive - Ampiasao mba Hahazo Izay Tadiavinao .
Ny adihevitra momba ny fianarana mianatra - Arguments for and Again
Ny fomba hananan'ny Major amin'ny fahombiazana amin'ny fanarahana ny fijalianao
Fanomezana sarobidy azo ekena ho an'ny mpianatra adolantsa
Fomba 5 hianaranao amin'ny vanim-potoana fahatelo
Ny fomba hahatratrarana ny tanjonao amin'ny drafitry ny fampivelarana ny tena manokana
Ahoana no ahafahanao manadinadina ny dinidinika momba ny fianarana azonao aorian'ny fakana fotoana
Ny fomba hahatongavana ho mpihaino tsara
Reductio Ad Absurdum amin'ny adihevitra
Washington University Admission
Records amin'ny TPC Sawgrass 'faha-17
Ny famaritana maro ny Glyp
Miteraka loza ve i Karma?
Keith Whitley Biographie
Juz '19 ao amin'ny CORAN
Verb for your Paper Research
2015 British Open: Zach Johnson mandà an'i Spieth, nandresy izany tamin'ny playoff
Fomba fitsangatsanganana ambony
Sparta - Mitsangàna amin'ny Power of Sparta
'Tout à l'heure': Ahoana ny fampiasana io fomba fiteny frantsay io?
Inona no azonao atao raha tianao ny mifidy laharana voalohany?
Top 10 True Crime Books momba ny mpamono olona psychopathic
Afaka mitondra fiaramanidina ho an'ny mpivarotra tapakila any Etazonia
Mianara miresaka 'Auld Lang Syne'
Ny tsara indrindra sy ny sangisangy Fantasy Anime
Fiaramanidina Essential Bike